“Aleo tsy hisy mihitsy ny akamakama ary aleo hitatra ny fanagadrana”, hoy ny Administratera sivily, Paolo Emilio Raholinarivo.
Ao ihany koa no tena lo fomba fiasa ary tsy mitsahatra manao kolikoly, hoy izy. Ny foloalindahy aza nezahina nodiovina vita ihany ka tokony hirosoana ihany koa ny eo anivon’ny fitsarana fa mijaly ny vahoaka madinika. Misy ny migadragadra foana satria kely vola ary afa-bela amin’nyafera maloto hatrany ny mpanao kolikoly ao. Ankoatra izay, mila jerena ihany koa ireo mpiasam-panjakana ambony sasany tahaka ny tompon’andraikitra eny amin’ireny sekoly ambony mampiditra mpiasam-panjakana tahaka ny ENAM sy ENMG ireny, eny hatramin’ny fanendrena ny tale amin’ny vaomiera manokana miady amin’ny kolikoly (ENMG) mba ho olona sahy mijoro tsy voababom-bola foana. Nanamafy hatrany moa ity Admnistratera sivily ity fa ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra amin’ny tanjona ilana ezaka fa tsy vitan’ny fitondrana fotsiny ny asa fampandrosoana.